रामकुमारी झाँक्रीले कुम्लो बोकेर मन्त्री क्वाटर छोडेको तस्बिर हेर्न आतुर छु :दिपेन्द्र कन्डेल • raradiodarpan.com
नेकपा एसबाट सरकारमा सहभागी भएका रामकुमारी झाँक्री सहित प्रेम आले , किसान श्रेष्ठ र विरोध खतिवडाको पद तत्कालका लागी थमौती भएको छ । खुस्कीसकेको मन्त्री पद तत्कालका लागी टरे पनि यत्रतत्र यहि बिषयमा चर्चा र बहस चलिरहको छ ।
आइतबार बेलुका देखी सोमबार दिनैभरी सम्म नेकपा एसका मन्त्रीहरुको चर्चाले मिडियाका हेडलाइन देखी सामाजिक संजालका भित्ताहरु समेत रगिंएका छन् । पदकै लागी पार्टी फुटाएको आरोप लाग्ने गरको नेकपा एस पार्टी र सो पार्टीका नेताहरु यस प्रकरणमा नमज्जा सँग नांगिएका छन् ।
नेकपा एसले मन्त्री बनेकाहरुको एक लटलाई फिर्ता बोलाएर अरु नयाँ मन्त्री बनाउँने खबरहरु बाहिरि रहेको बेला आफुलाई पब्लिक इनोभेटर भन्न रुचाउँने इन्जीनियर दिपेन्द्र कन्डेलले भने फरक ढंगको तर्क अघि सारेका छन् । उनले शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीलाई नमिठो जवाफ दिएका छन् ।
मन्त्रीहरु फिर्ता हुने खबर सुने पछि ओटीभी नेपाल डटकमसँग कुराकानी गर्दै कन्डेलले चोटा खान गएकाहरु झोलमा डुब्ने अवस्था आएको भन्दै तिखो टिप्पणी गरेका छन् । यत्तीमा मात्रै नरोकिएका उनले अब ६ महिने मन्त्रीहरुले मन्त्री क्वाटरबाट पोका पन्तुरा बाकेर हिँडेको देख्न पाइने बताएका छन् ।
कुराकानीको क्रममा कन्डेलले आफु सबैभन्दा बढि शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले कुम्लो बोकर मन्त्री क्वाटर छोडेको दृश्य हेर्न आतुर भएको बताएका थिए । मन्त्री पद खुस्किए पछि पोका बोकेर मन्त्री क्वाटर छोडेर झाँक्री निस्किएको तस्बिर हेर्न आफु निकै आतुर भएको उनले भनेका छन् ।
झाँक्री मन्त्री बनेकै दिन देखी उनको खरो आलोचना गर्दै आएका कन्डेलले नेकपा एमाले विभाजन गरेको दल नेकपा एस स्थानिय तहको निर्वाचनमा पत्तासाफ भएको भन्दै खुशि व्यक्त गरेका छन् । एमालेलाई हराउँछु भन्दै हिँडेकाहरु आफैँ सक्किएको भन्दै उनले पार्टी फुटाउँनेहरुको कहिल्यै राम्रो नहुने बताए ।
नेपालको राजनितीको मियोनै केपी ओली रहेको भन्दै कन्डेलले रामकुमारी झाँक्री देखी प्रेम आले र किसान श्रेष्ठ सम्मलाई गल्ती महसुश गरेर जती सक्दो छिटो एमाले फर्कन अनुरोध पनि गरेका छन् । माधव नेपालले पार नलगाउँने भन्दै उनले नेकपा एसमा भएका नेता कार्यकर्ताले जती सक्दो छिटो एमाले तिर बाटो तताउँछन् त्यति राम्रो हुने पनि उनको मत छ ।
नेकपा एसबाट अहिले मन्त्री भएका देखी अब मन्त्री हुने पनि कसैले पनि आगामी प्रतिनिधीसभाको निर्वाचन नजित्ने ठोकुवा पनि उनले गरेका छन् । कन्डेलले प्रश्न गरेका छन् के अब रामकुमारी झाँक्रीजीेले चुनाव जित्नुहन्छ ? प्रेम आलेले जित्नुहुन्छ ? प्रश्न सँगै उनले जवाफ पनि दिएका छन् ‘असम्भव’ ।